UZuma nomkhokha wehlandla lokugcina - Bayede News
Home » UZuma nomkhokha wehlandla lokugcina
UZuma nomkhokha wehlandla lokugcina
Indlela yokufakwa kwesicelo sesondlo sezingane
Okwenzeka kuZuma akwehlukile kunalokho okwenzeka kwabanye omengameli nabaholi
Kuke kwakhona inganekwane exoxwayo. Le nganekwane yabe ilandisa ngezwe elisha nelingcono kunawo wonke emhlabeni. Kuthiwa abaholi bakhona nobuholi bakhona kwabe kugeze ngencokazi. Izinhlaka zakhona zenqubo yedemokhrasi zingenakusolwa. Abantu bakhona bekwazi ukuxolelana bewuthingo lwenkosazana. UMthethosisekelo wakhona kuthiwa ungohamba phambili emhlabeni yize kungavezwa ubufakazi balokho. Le nganekwane yabe ingezwe iNingizimu Afrika. Okubuhlungu wukuthi nabantu baseNingizimu Afrika baze nabo bayikholwa.
Nokho okwenzeka eNingizimu Afrika kulezi zinsuku kufakazela iqiniso elithi nembala elakuleli liyafana nje namanye amazwe e-Afrika nasemhlabeni jikelele. Ngaphandle kokududulana kwabezindaba neziphathimandla, ukwehla komnotho nokunephulana kwabaholi bamaqembu epolitiki ngaphakathi nangaphandle kwezinhlangano zabo. Okwenzeka kuloyo onguMengameli wezwe nowe-African National Congress (ANC) kubeka leli qiniso obala. Emhlabeni jikelele osuke engumengameli wamukelwa ngenhlokomo njengoba kusuke kunethemba lokuthi loyo mholi uzokwenza kahle.
Oholayo usuke engazesweli izilolokotho ezivela emalungeni eqembu, omphakathi kanye nabaholi bamanye amazwe. Lokhu sikubonile ngesikhathi uMnu uJacob Zuma ethatha izintambo ku-ANC. Ngesikhathi ethatha izintambo iningi labantu phakathi nangaphandle kwenhlangano yakhe babemthwele ngeqoma bethi uza nokungcono. Phakathi kwabantu ababesho njalo ngabaholi kanye namalungu omfelandawonye wezinyunyana iCosatu kanye nenhlangano iSACP. Phakathi kwabaholi ababe sekhaleni lokweseka uZuma kwabe kungoMnu uZwelinzima Vavi, uMnu uJulius Malema, uDkt uBlade Nzimande noMnu uSdumo Dlamini.
Isifungo sikaMalema sokuthi ‘uyobulala egameni likaZuma’ kanye nombono kaVavi wokuthi uZuma ngaleso sikhathi ufana nesishingishane esinamandla ‘iTsunami’ kwaba ngundabuzekwayo. Lezi kwabe kuyizikhathi ezimnandi kubalingani, uMengameli uZuma ebukwa njengempendulo, uzifozonke ezinkingeni ezabe zikhungethe elakuleli.
Ngehlandla lakhe lokuqala kwasuka amaphepha lapho ekhuluma lokho okwabe kukitaza abaseki bakhe kusuka ezinhlelweni ezabe zihlose ukunqada ububha, intuthuko yasezindaweni zasemakhaya, ezemfundo, ubugebengu, intuthuko kwezomnotho kanye namakhono. Lokhu kwathakaselwa kakhulu. Okunye okwathakaselwa yisinqumo sikaMengameli sokuba kucoshakale imishanguso elwisana nesifo sengculazi nesandlulela, lokhu kwamenza wehluka kuMengameli uThabo Mbeki yena owabe enombono owehlukile ngalolu daba.
Nokho njengoba kuhlale kushiwo ukuthi kupolitiki isondo liyajikajika njengoba konke lokhu sekuyinganekwane kwabanye, uZuma usemele konke okubi nokuyihlazo. Empeleni isithombe ngaye ngesomholi okhohlakele noholela leli lizwe kwalasha. Okunye okwenzeka kuZuma wukuhlehlelwa zikhuni abegabe ngazo njengoba nabantu ababemthwele ngeqoma sekuyibo abamphikayo.
Omunye walaba nguDkt uBlade Nzimande namuhla ofisa lonke izwe ukuba lazi ngalokho akucabangayo ngoZuma namsola ngokubashaya ngemfe iphindiwe. “Ukube sasazi ngezinye izinto esesizazi manje ngabe senza ngenye indlela. Yilokho engizimisele ukukusho: Angifuni ukukhuluma kube ngathi ngisho imizekelo, kodwa ukuba sasazi ukuthi ukuzabalaza nokutabalasa kwethu kuzonikezwa umndeni weNdiya oyizifikanamthwalo obizwa ngoGupta ngabe saziphatha ngenye indlela.
“Sasingeke sicabange ukuthi uZuma ungumuntu ofanele ukuhola i-ANC nokuhola amadlelandawonye ingaphathwa eyokuhola izwe,” kusho uDkt uNzimande kwabezindaba muva nje.
NoMnu uVavi naye ushiya angalazi: “UJacob Zuma uyinhloko yohlelo elawula iNingizimu Afrika iye ebuseleni lapho amankentshane ayizitatanyiswa azobusa engabiki kumuntu, lapho uMthethosisekelo uzovithizwa zonke izinsuku, utshingwe ungabi namsebenzi.”
UVavi uthi ukwehliswa kwezilinganiso zomnotho zezwe kwakamuva kuye ezingeni lobuvobo kufanele kuvuse izakhamuzi zakuleli ngokuthi kuzoba nobubha ngaphansi kobuholi bukaZuma. Uthi ukwehliswa kwezwe kubekwe ezingeni lobuvobo kwakamumva kungezinye zezizathu ezenza acabange ukuthi kungani uZuma kufanele ashenxe. “Sisezingeni lobuvobo siyabonga ekunganakini nasebudedengwini bukaMengameli.”
Iphupho loMntwana ngeMeya entsha yoMkhandlu iZululand
UMnu uMalema yena ukhuluma njengomuntu ongabhala ibhuku ngoZuma nangalokhu akubiza ngezigemegeme zakhe zenkohlakalo. Kuthangi ekhuluma eThekwini, uMalema uthe uZuma kumele nxa ebeka phansi izintambo aboshwe ngoba ukungaboshwa kwakhe kungasho ukwanda komdlavuza wenkohlakalo ezinhlakeni zikaHulumeni.
Omunye umholi oselaxaze uZuma nguMnu uSdumo Dlamini onguMengameli weCosatu. UDlamini usola uKhongolose ngaphansi kukaZuma ngokungaxhumani neCosatu ezinqumeni ezinqala “Okokuqala ngqa, ebuholini bukaMengameli uZuma, iCosatu ayizange ithintwe ngokushintshwa kweKhabhinethi kokugcina. Kodwa singeke silokhu sitetema. Noma ngabe ezinye izikhulu ze-ANC bezikhala njengathi, sithi kubo siyabamukela ngoba besilokhu sikhala sodwa ekuqaleni. Bebejabula uma sithi asizange sithintwe ngezinqumo zama-e-toll. Asizange sithintwe kufakwa uMthetho Okhuthaza Ukuqasha (Employment Incentive Act),” kubalisa uDlamini.
Kukho konke ukuphawula kwalaba baholi abangenhla kukhona abangabona ubuxoki njengoba kwakuyibo ababephethwele ngeqoma uZuma. Nokho konke lokhu kuyingxenye yepolitiki yehlandla lokugcina laloyo ongumengameli wezwe nosuke esebukeka engenamndla. Konke lokhu abasola ngakho uZuma akukusha, abanye kade bekusho bona laba baholi bekuphika.
Okwenza namuhla bafudumeze okwabe kushiwo ngabanye wukubona ukuthi iminyaka kaZuma yokuba nguMengameli wezwe nowe-ANC sekuyasingwa. Kabafuni ikusasa ngale kukaZuma libehlulele kabi. Lokhu akuyona into okumele imangaze ngisho uZuma uqobo ngoba njengoba kunjalo nakwabanye ozakwabo, ihlandla lokugcina lilukhuni. Nokho izimbangi zikaZuma nazo kumele zazi ukuthi njengoba sekuyihlandla lokugcina nje naye kasakhathalele kuthenjwa ngoba kasabheke kuvikelwa ngakho angase afihle induku emqubeni.
UMfowakwaNomajalimane Dec 12, 2017